Home > Tendan-kanina
Fotoana famakiana: 4 minitra Eoropa amin'ny maha kaontinanta azy dia tena samihafa, Eoropa manolotra zavatra ho an'ny isan-karazana dia lavitra - matsiro kaikitry tafiditra. Fa aiza kosa ny tsimon'ny tsiro ho faly indrindra? Inona ny sary fisakafoanana anananao Instagram miangona amin'ny tiako 100's? Aza manontany tena ary hanomboka munching….
Fotoana famakiana: 4 minitra Be voninahitra tokoa ny sakafo, indrindra sakafo matsiro. Tena mora ny ho adala izany, rehefa nipetraka tany Eoropa manome anao be dia be izany antony! Ny tsara indrindra ho an'ny Foodies tanàna ao Eoropa, matoky antsika isika ary koa foodies, ary toy izany koa ianao…